सुदूरपश्चिममा १६ वटा थोत्रा ट्रक रंगरोगन गरी एम्बुलेन्स भनेर बाँडियो “आर्थिक अनियमिता भएको आसन्खा! – Life Nepali
सुदूरपश्चिममा १६ वटा थोत्रा ट्रक रंगरोगन गरी एम्बुलेन्स भनेर बाँडियो “आर्थिक अनियमिता भएको आसन्खा!
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले थोत्रा १६ वटा मिनी ट्रक रंग रो”गन गरी एम्बुलेन्सको स्वरुप दिएर प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा” वितरण गरेको छ । उक्त बाँ”डिएका थोत्रा एम्बुलेन्स चलाउन नपाउँदै थन्किएका छन् । सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्स पनि चालकले त्रासैत्रासमा चलाइरहेका छन् ।
मन्त्रालयले अत्याधुनिक भनेर बाँडेका “ती एम्बुलेन्स दुर्घटना हुने डरले चालकले समेत चलाउने आँट “गरेका छैनन् । डोटी जिल्ला अस्पतालमा आएको नयाँ एम्बुलेन्सका चालक रतन “धामीले सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको एम्बुलेन्स थन्क्याएर पुरानै एम्बुलेन्स चलाइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले मन्त्रालयले दिएको एम्बुलेन्सको ब्रेक नलाग्ने, ब्रेक लगाउँदा झट्का दिने, ओरालोमा गाडी तात्तिएर अत्यन्त गन्हाउने, मोडमा घुमाउन गाह्रो हुने, अलिकति गति लिनखोजे पल्टिनेलगायतका समस्या भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ एम्बुलेन्स चलाउनु त जोखिम मात्र छ, त्योभन्दा पुरानै ठीक छ, जोखिम मोलेर के यस्तो एम्बुलेन्स चलाउनु ।”
मन्त्रालयले दिएकोभन्दा विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिएका पुरानै एम्बुलेन्स चलाउन सजिलो र सुरक्षित लाग्ने गरेको अर्का एम्बुलेन्स चालक भीम विष्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एम्बुलेन्स पुराना छन्, रङ रोगनले मात्रै नयाँ भएको हो, त्यसैले चलाउनै डरलाग्छ ।”
मन्त्रालयले बाँडेका एम्बुलेन्स धामधम बिग्रिन थालेको चालक बताउँछन् । ग्राउण्ड क्लिरियन्स पनि अत्यन्त कम भएका कारण” पहाडी कच्ची सडकमा ती एम्बुलेन्स चलाउन अत्यन्त कठिनाइ भइरहेको” उनीहरुको दाबी छ । निःशुल्क प्रदान गरिएका एम्बुलेन्समा ७० वर्ष पार गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क र सुत्केरीलाई ५० प्रतिशत शुल्क लिएर सेवा दिन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले दिएका एम्बुलेन्स अति जोखिमपूर्ण र खर्चिला भएका कारण” चलाउन सक्ने अवस्था नभएको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ । कतिपय एम्बुलेन्सको इसिजी मनिटर पनि खसिसकेको दाबी” चालकहरुको छ । एम्बुलेन्स दिए पनि सबै सुविधा र साम्रगी भने नदिइएको स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालका कर्मचारीले गुनासो छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले कतिपय एम्बुलेन्समा ब्रेकको समस्या “रहेको गुनासो आउने गरेको स्वीकार” गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एम्बुलेन्समा ब्रेकको समस्या “भएको गुनासो आउने गरेको छ , हामीले मर्मतका लागि सिप्रदी ट्रेडर्समा पठाउने गरेका छौँ ।”
चिकित्सक, परिचालिका र सघन उपचार कक्षसहितको सुविधा हुने भनिएको एम्बुलेन्समा “इसिजी सेवामात्र रहेको पनि चालक बताउँछन्” । मन्त्रालयले कात्तिक २० गते सुदूरपश्चिमका विभिन्न अस्पतालमा १६ एम्बुलेन्स वितरण गरेको थियो ।-रासस
Previous सुनको मूल्य आकासिएपछि सर्वसाधारणले किन्ने भन्दा भाउ बढेको भन्दै गहना बिक्री गर्न थाले !
Next थपियो ४ सय मेगावाट बिजुली-महसुल अव ३ रुपैयाँ प्रतियुनिट ….